लाशलाई राति एक्लै किन छाडिदैन ? यस्तो छ रोचक कारण ! – Dainik Samchar
लाशलाई राति एक्लै किन छाडिदैन ? यस्तो छ रोचक कारण !
August 24, 2021 559
केही पौराणिक मान्यता अनुसार कहिले पनि व्यक्तिको अन्तिम संस्कार रातमा गरिँदैन। यदि कुनै व्यक्तिको मृत्यु राति भएमा उसलाई राति नै मसानघाटमा लगिँदैन ।
बरु मृतकको लाशलाई घरमा राखी त्यसको रखवाली गर्छन् । के तपाईले कहिल्यै यस प्रथाको बारेमा सोच्नुभएको छ, आखिर किन मृतक व्यक्तिको लाश एक्लै छाडिदैन ।
शास्त्र अनुसार दिन ढलेपछि यदि कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस व्यक्तिको शव तुलसीको बोट नजिक राखिन्छ र त्यस लाशलाई एक्लै छाड्नुहुँदैन। किनकी मरेको व्यक्तिको आत्मा त्यहीं वरिपरी भट्किरहेको हुन्छ र सबैलाई हेरिरहेको हुन्छ।
मरेपछि शरीर खाली हुन्छ र यस्तोमा दुष्ट आत्माको सायाले त्यस शरीरमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन सक्छ। यसकारण मानिसहरु शव नजिक बस्छन् र लाशलाई एक्लै छाड्दैनन् ताकि कुनै दुष्ट आत्माले त्यस लाश माथि कब्जा नजमाऊन् र कुनै व्यक्ति या वस्तुलाई नोक्सान पुर्याउन नसकून।
घरमा झगडा भइरहन्छ ? यस्तो हुनसक्छ कारण, जान्नुहोस् यसका उपायका बारेमा !
केतु ग्रहको अशुभ प्रभावका कारण मानिसको व्यवहारमा विकार आउन थाल्छ, तीव्र अभिलाषाको कारण, व्यक्ति दुराचार जस्तै कुव्यवहारतिर उन्मुख हुन्छ। त्यस्तै, गर्भपात, पत्थरी, गुप्त र असाध्य रोगहरू, खोकी, चिसो, पाचन रोग आदि हुने सम्भावना हुन्छ।
केतु ग्रहको अशुभ प्रभावका कारण मानिसको जीवनमा मुद्दा चल्ने. झगडा हुने, वैवाहिक जीवनमा समस्या आउने सम्भावनाका साथै बुबासँग मतभेद हुनसक्छ। जन्मकुण्डलीमा लग्न, षष्ठम, अष्ठम तथा एकादश भावमा केतुको स्थिति अशुभ मानिन्छ।
यसको कारण परिवारमा झै-झगडा, मदभेद, मनमुटाव आदि हुन्छ। तर केहि यस्ता उपाय छन् जसको प्रेयोगले केतुको अशुभ प्रभावलाई कम गर्न सकिन्छ।
केतुको अशुभ प्रभावबाट बच्नको लागि रातो चन्दनको माला अभिमंत्रित गरेर शुक्लपक्षको पहिलो मंगलबार धारण गर्नुपर्छ।
शुक्लपक्षको पहिलो मंगलवार नीलो धागोमा अभिमंत्रित अस्वगन्धको जरा लगाएर केतु ग्रहको अशुभ प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। केतु ग्रहको शान्तिका लागि तिल, कालो फूल, कालो कपडा, उडुको कालो दाल, फलाम, कालो छाता आदि दान गर्न सकिन्छ। यसो गर्नाले लाभ मिल्नेछ।
जन्मकुण्डलीमा केतु दोष रहेकाले भगवान शिव जीको पूजा- अआराधना गर्नु पनि लाभदायक हुन्छ।
PrevBreaking: काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १६ सम्म निषेधाज्ञा थपियो
Nextकुलमानले ६८ करोड भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा अख्तियारले थाल्यो छानविन, मगायो कागजात
सरकारले महंगी मध्धेनजर गर्दै फेरी ह्वात्तै बढायो वृद्धभत्ता, कति पुग्यो ? तुरुन्तै हेर्नुस
बालेनको मत आधा लाख कट्यो – अब गन्न बाकि कति ?
कोरोनाबाट बाँच्न घर फर्किए तर रहेनन्, को–को हुन सुदूरपश्चिमका ६ जना ?